कर्णाली सरकार रु.३३ अर्ब सम्मको वजेट ल्याउने तयारीमा छ : मन्त्री ज्वाला « Salyan Today
कर्णाली सरकार रु.३३ अर्ब सम्मको वजेट ल्याउने तयारीमा छ : मन्त्री ज्वाला
'मूख्य प्राथामिकता स्वास्थ्य'
सल्यान १८, बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारले रु. ३३ अर्ब सम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा रु. ३३ अर्ब सम्मको बजेट ल्याउने प्रदेश सकारले तयारी गरेको बताउनुभएको हो । अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरिएको उहाँको भनाई छ ।
बिहीवार आज सल्यान खलंगामा पत्रकार सँग कुराकानी गर्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त बजेटको सिलिङ अनुसार वजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । ‘हामीले ३३ अर्ब सम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ, जसमा समानिकरण अनुदान १० अर्व, राजस्व बाँडफाँड तर्फ साढेँ ७ अर्व, आन्तरिक स्रोत ३९ करोड हुने हाम्रो अनुमान छ’– उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले बजेटका बिषयमा सरोकारवाला निकायहरु सँग छलफल शुरु भएको बताउनुभयो । ‘प्रि–वजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हो, तर अहिले त्यो सम्भावना भएन्, हामीले बिभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले तोकिएको समय असार १ गते अगाडी नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने बताउनुभयो । तर संसदिय प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या भएको उहाँको भनाई छ ।
कोरोना भाइरसका कारण सरकारले यस बर्ष पुरै वजेट खर्च गर्न समस्या भएको उहाँको भनाई छ । ‘हामीले यस बर्ष करिब सबै बजेट खर्च गर्ने गरी काम अगाडी बढाएका थियौँ, तर काम गर्ने मूख्य समय चैत, बैशाख र जेठमा कोरोनाका कारण काम हुन सकेको छैन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘काम गर्ने मुख्य समयमा काम नहुदाँ पुरै बजेट खर्च नहुने भयो ।’
चालु आव २०७६र७७ का लागि कर्णाली सरकारले रु ३४ अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर कोरोनाका कारण करिब १० अर्ब बजेट खर्च नहुने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । अघिल्ला वर्षका बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, पर्यटन र पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै आएको थियो ।
मन्त्री ज्वालाले आगामी बर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएर बजेट ल्याउने बताउनुभयो । परम्परागत तरिकाले भन्दा पनि समय सापेक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएर बजेट ल्याउने उहाँको भनाई छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार ः त्यसका लागी पूर्वाधार’ भन्ने मुल नारालाई आत्मसाथ गर्दै रोजगारीमुलक, उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएर बजेट ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।